Kingston Stanley | Asa - Asa aman-tany - Travel Dia ahoana ny fomba hijerena ny CV anao?
Kingston Stanley sy Dubai City Company
Kingston Stanley - Ahoana no ahafahana mijery sy mahazo ny CV ho voamarikao?
Kingston Stanley - Ho an'ireo kandidà rehetra izay miady hahazo valiny, na e tafatafa avy amin'ny fangatahana asa, ireto dingana vitsivitsy mety hanampy.
Tsarovy ny mpitantana tsipika, mpiandraikitra ny asa fanarenana na mpanolotsaina fanaraha-maso matetika miaraka amin'ny CV an-jatony tsy tapaka. Mampalahelo, kandida maro manana “fomba iray manaparitaka” amin'ny fandraisana mpiasa ary handefa ny CV-ny amin'ny andraikitra rehetra, na dia tsy mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna aza izany. Manoro hevitra anao aho hanao izao manaraka izao:
Alefaso ihany ny CV anao amin'ny anjara asa tianao, raha ny fiteny, traikefa amin'ny sehatra sy traikefa an-taonany.
Vakio tsara ny dokambarotra rehetra ary araho tsara ny boaty rehetra.
Fikambanana mpanafika saika mila traikefa manokana amin'ny indostria manokana, satria ny mpanjifany dia handoa sarany mandritra ny lalao marina.
Raha te hanova orinasa ianao dia ataovy toy izany amin'ny orinasa iray azo ampitahaina, na mandeha mivantana amin'ny orinasa (fa tsy amin'ny orinasa iray).
Vantany nandefa ny CV anao tamina mpampiasa iray ianao, andramo hametraka hoe iza ny mpikarakara momba ny mpikarama ary jereo raha afaka manana resaka 5 haingana minitra haingana momba ny mombamomba anao ianao.
Zahao foana ny toerana nandefasan'ny CV anao, arizo tsara sy asio sarintany ny tsena lisitry ny mpampiasa mety.
Manatreha hetsika ao amin'ny tambajotra toa an'i Dubai Lynx, MEPRA, Cityscape, Gitex, Arabian Travel Market ary mivory mivantana amin'ireo mpanapa-kevitra. Tsara tarehy foana.
Farany, ny ampahany sarotra indrindra amin'ny fanadihadiana dia ny mahazo ny tafatafa. Rehefa vita ny famandrihana dia ataovy azo antoka fa mandany fotoana miomana ianao ary tsy mitsangana fotsiny raha tsy manao fikarohana ianao.
Tsidiho ny Kingston Stanley
Azontsika atao ihany koa ny manolotra toro-hevitra rehefa mahafeno ny resadresaka
Aza adino ny manao fikarohana momba ny orinasa. Vakio ny fizarana 'About Us' amin'ny tranokala ary ampiasao izany fampahalalana izany rehefa miresaka mivantana momba ny antony te-hiasa ho azy ireo ianao. Aza milaza fotsiny hoe te hiasa amin'ny orinasa lehibe, orinasa lehibe na fanombohana kely ianao. Ataovy mety amin'ny mpanjifanao ny valin-teninao. Jereo ny mombamomba ny orinasa ao amin'ny Wikipedia, as Izany dia hilaza aminao betsaka izay tokony ho fantatrao momba azy ireo.
Miomàna amin'ny fotoana hanaovana ny dinidinika. Amin'ny fotoana ara-potoana dia dimy ka hatramin'ny folo minitra aloha. Raha ilaina dia, makà fotoana handeha hitety ny toerana misy ny dinidinika alohan'ny fotoana mba hahafantaranao tsara ny lalana alehanao, ary amin'ny firy dia ho tonga any.
Miakanjo hahazoana resadresaka fanadihadiana
Ataovy azo antoka akanjo mifanaraka amin'ny fahombiazan'ny Interview Ny fahatsapana voalohany ataonao amin'ny mpampiasa mety dia mety hisy fiovana lehibe. Ny fitsarana voalohany ataon'ny mpanadihady dia ho miankina amin'ny fomba fijerinao sy ny fomba fitaovanao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitafiany tsara amin'ny resadresaka momba ny asa.
Fanontaniana hiomanana amin'ny:
1. Inona no fantatrao momba ny orinasa? - Oviana no naorina, toerana birao manerantany, headcount mpiasa sns.
2. Inona no mahaliana anao amin'ity andraikitra ity? - Raha azo atao dia azo antoka fa fantatrao ireo andraikitra avy amin'ny famaritana ny asa
3. Lazao ahy ny momba anao - Ity fanontaniana ity dia midika hoe "manome ahy fijery malalaka momba ny hoe iza ianao, matihanina miteny, alohan'ny hanombohantsika hanan-danja."
4. Fa maninona no manakarama anao izahay? - Mieritrereta momba ny traikefa / mety anananao
5. Inona avy ireo herinao lehibe sy fahalemena? Manana ohatra iray ho an'ny tsirairay.
6. Inona ireo tanjonao ho avy? - Aoka ho resy lahatra / miasa saina
7. Fa maninona no miala amin'ny asa ataonao ianao?
8. Ahoana no fomba itondranao ny tsindry? - Miresaha momba ny fomba ataonao laharam-pahamehana amin'ny asa.
9. Inona avy ny zavatra andrasanao?
10. Inona no fanontaniana anananao?
Aza milaza fotsiny ny lisitry ny fahaiza-manao fototra. Miresaka momba ny hery mivaingana 1 na 2 - izay misy ifandraisany amin'ny toerana misy azy - ary ampio ireo OHATRA. Ireto manaraka ireto ny hevitrao ho anao;
1. Manana fahaizana manoratra tena mahay aho. Nataoko matetika ny famoahana gazety ho an'ny mpanjifa na drafitra marketing ho an'ny Talen'ny orinasa, amin'ny fanamarihana fohy indrindra.
2. Mpaneho hevitra tsara aho ary mahay miteny Arabo sy anglisy, ary manana traikefa teo aloha niasa tamin'ny maro ekipa samihafa sy mahomby.
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny fahalemenao dia fanontaniana manan-danja. Mila dinidinika iray FOANA mahasosotra miaraka amin'ny kely saina. Aza hadino ny manandrana manova ny fahalemena anao ho hery.
1. Manana fironana aho hiteny hoe 'eny' niasa tamiko ny asa ary matetika dia sahirana aho ao amin'ny birao mandra-pahavitana ilay asa, na dia tsy tena andraikiko aza izany.
ZAVA-DEHIBE: Amin'ny fiafaran'ny fahalemena dia mamarana amin'ny lafy tsara.
Fanontaniana azonao anontaniana azy ireo
Rehefa tapitra ny dinidinika dia mametraha fanontaniana vitsivitsy manangana fifandraisana amin'ny mpanadihady, toy ny;
1. Inona no tianao indrindra amin'ny orinasa?
2. Inona no atao hoe fomba fitantanana, na kolontsain'ny birao?
3. Firy ny olona ao amin'ny ekipa?
Hazavao ny fizotrany
Misy zavatra tianao tianao hiverenako indray? Inona avy ireo dingana manaraka ?.
Kingston Stanley no nomerika dizitaly manina, sampan-draharaha misahana ny asa varotra sy teknolojia izay hita any Moyen Orient sy UK, miara-miasa amin'ny mpanjifa sy kandida manerana ny tontolon'ny varotra feno ihany, sehatra eo amin'ny nomerika sy teknolojia hatramin'ny voalohany 2011.
Hanampy anao hahita izahay, hikira, hisafidy ilay kandidà mety ho anao asa ara-barotra sy teknolojia mitambatra, ary manana tambajotra mpirotsaka be indrindra sy maharitra sy mendrika izahay. Na manana anjara ianao ka mila hamenoina haingana na portfolio killer, dia hahita izay tadiavinao eto ianao. Ny etika matanjaka, manao ny marina, tsy mivadika ary miasa miaraka amin'ny tanjona no andry efatra amin'ny orinasanay ary izany dia taratry ny marika, ny mpiasa sy ny olona isoloanay azy.
Orinasa Dubai ankehitriny fanomezana torolàlana tsara ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.